सहिद नीतुको घरमा एक दिन | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » सहिद नीतुको घरमा एक दिन
सहिद नीतुको घरमा एक दिन
मधेश आन्दोलनको क्रममा शहिद भएका नितु यादवको घर जमुनिया (जनकपुर बाट ५ किमी उतर) हिजो (असार ७ गते) पुगेका थिए । घरमा ताल्चा लागेको देखेर छिमेकीसँग सोधपुछ गर्दा एकजनाले भन्यो, छोराको मृत्यु पश्चात नितुको आमा घरमा प्राय बस्दैनन्, दिनभरी खेत मै बस्छन्, घर बस्दा छोराको याद आउँछ, कहिले उसको किताब त कहिले उसका कपडासँग कुरा गरिरहन्छ ।
एक छिनमा उनी घर आईन्, हामीसित कुरा गर्दा कैयो पटक उनि रोईन्। छोराको नाम नितु कसरी भयो बारे जिज्ञसा राख्दा, उनि भनिन, दोस्रो सन्तान हुने बेलामा छोरीको धेरै अभिलाषा थियो तर छोरा भयो, त्यही दिनदेखि छोरालाई नितु नामबाट बोलाउन थाले, धेरै चूलवेले केटा थियो, दिनभरी उछल कुद, खोई त्यो दिन के भयो ? मेरो छोरा किन भाग्न सकेन ?
त्यही छेउमा बसेका एकजना करीव २२-२३ वर्षको युवा बिचमै हाम्रो कुरा काटेर अलि रिसमा भन्न थाले, दाजु तपाईलाई थाहा छ नितुको मृत्यु कसरी भयो ? मपनि सँगै थिए, हाम्रो गाउँबाट थुप्रै मानिस गएका थिए, हामी जुलुसको पछाडी थियौं । सबै कुरा राम्रै थियो, हामी एउटा टोलीको नाच गान हेर्दै रमाई रहेका थियौं कि अचानक गोली चल्यो र भागा भाग भयो । हामी पनि तीन जना नितुसँगै भाग्यौ, म र मेरा एक साथी पर्खाल हाम फ्यालेर पारी लुक्यौं तर नितु पर्खाल वारी नै एउटा झाड़ीमा लुक्यो । हामी बोलाउन लागेका थियौं कि त्यतिकैमा प्रहरीको गाडी आउन थाल्यो, हामी त्यहाँबाट चुपचाप पछाडीको बाटो हुंदै चूरोट फ्याक्टरी तिर भाग्यौ । पछि बाट नितुको मृत्यु गोली लागेर भएको थाहा पायौ ।
यतिकैमा बिचबाट अर्को एकजना कराउँदै भने, के गोली लागेर मृत्यु भएको भन्छौं, नितुको हत्या गरिएको छ ।
त्यहाँ भएको प्रत्यक्षदर्शी अनुसार झाडी हलेको देखेर प्रहरीको गाडी त्यही रोकियो र दुई तीनजना पछाडीबाट ओर्लेर गाली दिंदै नितुलाई झाडीबाट बाहिर निस्किन भन्यो । नितु आफ्नो दुईटै हाथ माथी उठाएर प्रहरी नजिक आए, नजिक आउन बितिकै एउटा प्रहरी हात बटारेर उल्टो पारे र अर्को दुई तीन जना प्रहरी बुटैबुटले हिर्कायो र टाउकोमा बन्दूक़ राखेर गोली ठोक्यो । यदि नितुको पोस्टमार्टम भएछ भने उनका एउटा हात भांचिएको हुनुपर्छ ।
अर्को एकजना फेरी रिसमा भन्न थाल्यो, तपाईहरू अहिले शहरबाट मलहम लगाउन आउनु भयो, फोटो लिनु हुन्छ र जानु हुन्छ, पछिबाट शहिदको नाम पनि याद रहन्दैन होला।
जनकपुरमा भएको कुनै पनि आन्दोलनमा शहरीयाहरू रोडमा निस्किदैन, जुलुसमा पनि हामी नै हुन्छौ र मर्नमा पनि हामी नै।
उसको बोलीमा यथार्थ थियो । जनकपुर केन्द्रित कुनै पनि आन्दोलन वरपरको गाउँवासीहरू कै कारण सशक्त र सफल भएका छन् ।
नितुको आमा फेरी रूंदै भनिन्, धेरै जनाले घाउमा मलहम लगाउने आए, मसँग फोटो खिचाए, फोन नं. छोडेर गए तर जब अस्ति मेरो छिमेकी जयप्रकाश यादव, उनका श्रीमति ईन्दु र छोरा मनिष नितुको बुवा र मलाई घरबाट निकालेर पिट्यो । कोही आई दिएन, मेरो बाख्रा उसको खेतमा गएको निह्युले पिट्यो ।
आमाको कुरा पुरा हुन पाए छैन कि नितुको जेठो भाइ जो यसपाली १.७४ ग्रेड ल्याएर कक्षा १० पास गरे भन्न थाले, आमा छोड़ी दिनु तिनीहरूको कुरा, माफी मागी सके, भईगो, यो दाजु काठमाण्डौबाट आउनु भएछ, दुई महिना पहिला नै पैसा पठाउनु छ, आमाको नाममा बैंक खाता खोलेर खाता नं. पठाउन भन्नु भएको थियो तर तपाईको खाता नभएको कारण उहाँहरु स्वयं आउनु भएको छ ।
म उहाँहरूलाई विश्वास दिलाए कि सधैँ उनिहरूको सहयोगको लागी पहल गर्नेछु। हेल्प मधेशी (क़तार च्यापटरु बाट विशेष गरि तपाई (नितुको आमा) लाई प्रति महिना रू १५०० गरि लगातार ३ वर्षसम्म सहयोग पठाउने छु । उहाँलाई खाममा १५०० राखेर पहिलो किस्ता दिए ।
अब उपरान्त रियाज साफी हेल्प मधेशीको तर्फबाट तपाईहरू को लोकल केयर टेकर हुनेछ र कुनै पनि कुराको लागी रियाजसँग सम्पर्क गर्न जानकारी गराए।
नीतुका परिवारले सरकारबाट पाउने १० लाख रुपियाँ अझै पाएको छैन । नपाउनुको कारण बुझ्दै जाँदा सिडियो कार्यालयमा नीतुको नाम निकु भएको छ । निकु भएको कारणले १० लाख रुपियाँ पाउनबाट बन्चित भएको छ । यो कुरा सिडियोबाट बुझ्दा उनले नीतु भन्ने व्यक्ति नै निकु हो भनि सिफारिस गाविसबाट आए त्यसै आधार १० लाख रुपियाँ दिने बताए अनुसार हामीलाई विश्वास लागेको छ कि नीतुका परिवारले १० लाख रुपियाँ पाउनु हुनेछ ।
फर्किने बेलामा नितुको भाइसँग एकछिन कुराकानी भयो । कक्षा १० पास गरेकोमा बधाई दिंदै अगाडी पढ़्न प्रोत्साहित गरे र पढ़ाईको लागी पनि थप सहयोग मधेशीबाट गरिने बताए । उच्च शिक्षा भयो भन्ने राम्रो ज़ागिर हुन्छ र भोलीको दिन सरकारबाट पनि शहिद परिवारको सदस्यलाई सरकारी जागीरमा प्राथमिकता पांउछ र यसको लागी लोकतान्त्रिक मोर्चाले पनि पहल गर्ने आश्वासन दिए।
हुन त सरकारले शहिद परिवारलाई कति सुविधा दिन्छ र मधेशी मोर्चाले कति पहल गर्छ बारे अहिले यकिनको साथ भन्न नसके पनि आश चांहि छ कि शहिद परिवारको लागी अवश्य पनि विशेष योजना बन्नेछ । न बने हामी सबै मिलेर दवाब दिउंला भन्ने विश्वास छ।